७ वर्षीया बालिका बलात्कारको आरोप लागेका वृद्ध १२ दिनमै छुटे, पीडित झनै पीडामा
-महिला खबर- कैलाली । ७ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेका कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का ८० वर्षीय वृद्ध बालाराम सुवेदी धरौटीमा रिहा भएका छन्। गएको जेठ ११ गते आफ्नै नतिनी संगै खेलिरहेकी नातिनीकी साथीलाई दिउँसो करिब ३ बजेतिर घरमा कोही नभएको मौकामा वृद्ध बालारामले बलात्कार गरेको आरोप छ । बालिकाले पिसाव फेर्न […]
अधिकारकर्मीको दबाबले आत्महत्या दुरुत्साहन अपराधको जाहेरी दर्ता
–महिला खबर– चितवन । भरतपुर महानगरपालिका १२ की सरिता न्यौपानेलाई मर्न बाध्य बनाएको भन्दै माइती पक्षले दिएको जाहेरी बिहीबार बेलुकी प्रहरीले दर्ता गरेको छ । यस अघि प्रहरीले सरिताका बुबा रामचन्द्र न्यौपानेले दिएको आत्महत्या दुरुत्साहन अपराधको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणले बिरोध गरेका थिए । बुधबार साँझ ३२ वर्षीया सरिताले घरभित्रै डोरी लगाएर […]
संकटमा पनि अवसर देख्ने उनी किन आज थाकिन् ? उनीमाथि कुनै दवाव र करकाप भएर पो न्याय खोज्न हिच्किचाएकी हुन् कि ! वा एउटी महिला भएकै कारण उनी एक्ली भइन् ?
हिंसाको सिलसिलामा यसरी ‘ब्रेक’लाग्यो
बैतडी ।तर प्रस्ताव पक्कापक्की हुनु अघि एउटा प्रस्ताव राखे,–छोरीले पढ्न पाउनु पर्छ । केटा पक्ष राजी भए । उनको बिहे भो ।
जाजरकोट । कथित उपल्लो जातकी केटीसंग बिहे गर्न लागेको थाहा पाएपछि गाउँलेहरुको कुटाइबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको छ । केटी लिन शनिबार राति रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती पुगेका विकको गाउँलेको कुटपिटबाट मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठका अनुसार नवराजसँग गएका अरु छ युवा […]
बालिका बलात्कारको आरोप लागेपछि फरार मदन अधिकारीले फेसबुकमार्फत भने, ‘म आफै प्रहरीमा जान्छु’
बन्दाबन्दीको समयमा पनि घरबाट फरार भएका उनले आफू कहाँ छु र कहिले प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छैनन् ।
१३ वर्षीया बालिका बलात्कार गरि गर्भवती बनाउने तीन जना प्रतिष्ठित व्यक्ति पक्राउ
बुबा, हजुरबुबाको उमेरका आफ्नै शिक्षक र अन्य तीन जनाले पटकपटक बलात्कार गरेपछि मानसिक रुपमा प्रताडित उनले भनिन्, ‘आमासंग बोलचाल छैन, बुबासंग भन्न सकिन ।’
राहत पाएपछि पूर्ण अशक्त टीकाले भनिन्, ‘हातले गर्न मिल्ने काम मिलाइदिनुस्’
अप्ठ्यारो समयमा पाएको राहतले आफूलाई ठूलो सहयोग हुने उनले बताइन् ।